Izindatshana zikaJafar Sadhik Martech Zone |
Imibhalo nge UJafar Sadhik
Umthengisi wedijithali oshisekayo onolwazi lomsindo emikhakheni efana namathuluzi we-SaaS, i-CX, izibalo ze-churn, njll. Phambilini, wayesebenzela amabhizinisi aphezulu njengeSportsKeeda neNeil Patel Digital India, futhi njengamanje usebenza eSmartKarrot Inc. Uyathanda ukufunda izincwadi ngesikhathi sokuphumula futhi othanda kakhulu imisebenzi ka-Agatha Christie.
NgoLwesithathu, Novemba 11, 2020 ULwesine, April 1, 2021 UJafar Sadhik
Sonke sizwile nge-Salesforce, i-Hubspot, noma i-Mailchimp. Baye bangenisa ngempela inkathi yokwandisa ukukhula kwe-SaaS. I-SaaS noma i-Software-as-a-service, ukubeka kalula, yilapho abasebenzisi besebenzisa isofthiwe ngokubhaliselwe. Ngezinzuzo eziningi ezifana nokuvikeleka, indawo yokugcina encane, ukuguquguquka, ukufinyeleleka phakathi kokunye, amamodeli we-SaaS abonakale enezithelo kakhulu ukuze amabhizinisi akhule, athuthukise ukwaneliseka kwamakhasimende kanye nolwazi lwamakhasimende. Ukusetshenziswa kwesoftware kuzokhula ngo-10.5% ngo-2020, iningi lazo elizobe liqhutshwa yi-SaaS.